Italy inorambidza misika yeKisimusi pamusoro peKoVID-19 kutya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Italy inorambidza misika yeKisimusi pamusoro peKoVID-19 kutya
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Hurumende Nhau • Health News • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Pakati pemitemo mitsva mune yazvino Hurumende yeItaly Chirevo chaNovember 3, 2020, iyo yakakamura Italy kuita dzvuku, orenji uye yero nzvimbo, pane kurambidzwa kwakajeka pakuvhurwa nekubatwa kwemisika yeKisimusi - imwe yeyakareba mhemberero yeKisimusi. tsika, sosi yebhizinesi uye kunakirwa kwevana.
Izvi zviitiko, zvinoitwa kunze kwechiitiko chezvekutengesa munzvimbo dzakatsaurwa kumisheni kana zvimwe zviitiko zvemusika, zvinowira pasi pechikamu chebhizimusi, nekudaro zvakarambidzwa. Iyi gadziriro inoshanda kunharaunda yese yeItaly.
Iyo yekuwedzera kurambidzwa inonyima vashanyi vevashanyi uye ekufamba mavanze eimwe inotungamira chigadzirwa uye chakakosha chikamu mukuronga kwegore negore kwekurongeka kwekushanya.
Maererano neConcesercenti data data, misika inopfuura 560 yeKisimusi yakamisikidzwa muItari, mumakore achangopfuura akakwezva avhareji yevashanyi vanosvika mamirioni gumi nematatu vakaburitsa huwandu hwakawanda hweanopfuura mamirioni mazana manomwe nemakumi masere, uye vaisanganisira chiitiko chevane zviuru makumi maviri nemasere, kunyanya vatengesi vemumigwagwa. , mhizha uye vamiririri vekufamba.
Zvakare, zviwanikwa zvakakosha zvemari zvakagadzirwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzaigadzira misika yezvitoro zvisati zvaitika yeKisimusi, pamwe nekupa varaidzo kuvana.